HomeWararka Ciyaaraha MaantaDavid Luiz oo qorsheynaya inuu ka tago Arsenal
May 5, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
David Luiz ayaa lagu soo waramayaa inuu raadinayo Koox Macquul ah, iyadoo hubanti la’aan ay ka jirto mustaqbalkiisa Emirates.
Daafaca reer Brazil ayaa arki doona heshiiskiisa haatan ee Emirates inuu dhacayo xagaaga, mana muuqato wax calaamado ah haddii loo soo bandhigi doono heshiis Cusub iyo haddii kale.
Luiz ayaa noqday shaqsi fure u ah garoonka iyo banaanka garoonka Waqooyiga London xilli ciyaareedkan, laakiin iyadoo Dinos Mavropanos iyo William Saliba ay ka soo laabteen amaahdii ay ku soo qaateen xagaagan, Mikel Arteta ayaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo safkiisa daafaca.
Sida laga soo xigtay CBS Sports , wakiilada Luiz ayaa durbaba qorsheynaya bixitaankiisa, iyadoo kooxda Serie A ka dhisan ee Lazio lala xiriirinayo inay u dhaqaaqeyso xidigan.
Ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa xilli ciyaareedkaan saftay 29 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay hal gool Premier League iyo mid kale Europa League.